Kedu ihe ị tụrụ anya n'aka Rasberi Pi 4? | Akụrụngwa n'efu
Kedu ihe ị tụrụ anya n'aka Rasberi Pi 4?
Rasberi Pi 3, ụlọ ọrụ SBC kacha ọhụrụ sitere na Raspberry Pi Foundation, gosipụtara na 2016. Ọ gafeela otu afọ kemgbe, nke ọtụtụ na-akpali mmasị na ụdị bọọdụ SBC ọhụrụ, ihe nlele nke na-emelite nke ugbu a. Ihe ọtụtụ ndị kpọrọ Rasberi Pi 4.
Ndị guzobere rasberi Pi doro anya: Agaghị enwe Raspberry Pi 4 n'oge a. Ma, nke a apụtaghị na anyị enweghị ike iche echiche ma ọ bụ chọọ ihe akụrụngwa nke ọdịnihu Pi 4 kwesịrị inwe ma ọ bụ nke ahụ kwesịrị iburu n'uche maka nsụgharị ọzọ.
1 Nha na nha
Nha na nha
Ihe nha nke bọọdụ SBC a dịwanye mkpa ma ọ bụrụ na ahụrụ m n'oge ọnwa gara aga na ha ewepụtala ụdị nke Raspberry Pi, ụdị nke anọ ekwesịghị ileghara atụmatụ a anya. Ihe nlereanya Pi Pi 3 nwere ihe ndị a 85 x 56 x 17 millimeters, usoro a nabatara nke ọma (na dịka ihe akaebe nke a, anyị nwere ọtụtụ ọrụ dị adị na efere a) mana ọ ka nwere ike ibelata n'ihu.
Projects amasị Mkpụrụ Pi Slim na-egosi na ọdụ ụgbọ ethernet na ọdụ ụgbọ USB “na-ebuba” bọọdụ ahụ ike, ma enwere ike iwepụ ya iji belata nha ntụ. Enwere ike utu Pi 4 kwesịrị ịgbaso usoro ndị a na wepụ ihe dịka ọdụ ụgbọ ethernet ma ọ bụ jiri ọdụ microsb ma ọ bụ ọdụ USB-dochie ọdụ ụgbọ USB. Gbalị ịnweta nha nke mbadamba Pi Zero na mbadamba Z ga-abụ atụmatụ dị mma, ya bụ, iru 65 x 30 mm na-enweghị ntaramahụhụ ọrụ ndị ọzọ dịka ike ma ọ bụ nkwukọrịta.
Ikwu okwu banyere chipsets ma ọ bụ kama chipsets n'ọdịnihu maka Rasberi Pi 4 dị oke egwu, mana anyị nwere ike ikwu maka ike. Pi Pi Pi 3 nwere 1,2 Ghz Quadcore SoC, mgbawa dị ike mana ọ gaferela oge ọ bụla ma e jiri ya tụnyere ike ụfọdụ ngwaọrụ mkpanaka. Ya mere, echere m Pi 4 Pi kwesịrị ịnwe ma ọ dịkarịa ala otu chipset na cores asatọ. Na enweghị obi abụọ, kewapụ GPU na CPU n’elu bọọdụ. Nke a ga - apụta ike karịa maka bọọdụ yana site na ndọtị inwe ike ịrụ ọrụ ndị dị ka ịsụgharị onyonyo ma ọ bụ naanị inye mkpebi ka mma na ntanetị.
Nke a mmewere bụ ihe kasị mkpa na anyị na-aghọta na ọ bụ ihe kasị siri. Ọ bụ ya mere m ji chee na Raspberry Pi Foundation ga-agbanwe chipset na Raspberry Pi 4, ebe ọ bụ na ule ndị ahụ adịghị nwayọ na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ iwu, si otú a na-egosi igbu oge nke ụdị ọhụrụ ahụ.
Versionsdị ọhụrụ nke Raspberry Pi ekwuola okwu nke nchekwa. Agbanyeghị na ebe nchekwa dị ka dị site n'ọdụ ụgbọ mmiri microsd, ọ bụ eziokwu na enwere ike iji ọdụ ụgbọ USB dị ka ngalaba nchekwa. Ọtụtụ bọọdụ Rasberi Pi nwere gụnyere modulu nchekwa eMMC, ụdị nchekwa dị ọsọ ọsọ ma rụọ ọrụ nke ọma karịa pendrives. Enwere ike, Rasberi Pi 4 kwesịrị ịnwe modulu nke ụdị ebe ị nwere ike iwunye kernel software ma ọ bụ nwee ike iji ya dị ka swap memory.
Ma ihe ndị kasị siri na ihe dị mkpa na nke a bụ ebule nchekwa ma ọ bụ kama ole ram ebule ya kwesịrị inwe. Pi Pi 3 nwere 1 Gb nke RAM, ọnụọgụ nke na-agbalite ọrụ nke bọọdụ rasberị ntakịrị. Ma ntakịrị karịa ga-aka mma. N'ihi ya, n'ọdịnihu Pi Pi 4, inwe 2 Gb nke ebule agaghị abụ naanị mkpa Kama nke ahụ, ọ nwere ike ime Raspberry Pi ka ọ bụrụ ebe a na-ejikarị ya, mechaa dochie kọmputa desktọọpụ maka ọtụtụ ndị ọrụ.
Isiokwu nke nkwukọrịta dị ezigbo mkpa maka mbadamba dịka Raspberry Pi. N'oge nsụgharị ikpeazụ, isiokwu a agbanwebeghị nke ukwuu, ihe kachasị dị iche iche bụ itinye Wi-Fi na modul Bluetooth. Pi Pi 4 kwesịrị ịtụle ụfọdụ nkwukọrịta ma chee ma ịgbasa ụdị nkwukọrịta ma ọ bụ na ọ bụghị. Ekwere m na ya a ga-ewepụ ọdụ ụgbọ mmiri ethernet na bọọdụ ahụ. Portgbọ mmiri a bara ezigbo uru mana ọ na-emetụtakwa nha mbadamba ahụ, ya na Wi-Fi modul ga-anọchi ya, teknụzụ tozuru oke nke zuru ụwa ọnụ. Na mgbakwunye, enwere ndị nkwụnye si n'ọdụ ụgbọ mmiri a gaa n'ọdụ ụgbọ mmiri USB, yabụ inwe ọdụ ụgbọ USB, anyị nwere ike ịnweta ọdụ ụgbọ mmiri ethernet, ọ bụrụ na anyị chọrọ ọdụ ụgbọ mmiri a ma ọ bụ na anyị enweghị ike ịnwe WIF modul na-arụ ọrụ.
Ngwurugwu Bluetooth abụrụla nnukwu ihe enyemaka maka ọtụtụ ndị ọrụ, mana nsụgharị 4 nke bọọdụ a nwere ike ịgbasa ọnụọgụ teknụzụ ikuku, gụnyere teknụzụ NFC, teknụzụ na-atọ ụtọ maka ọrụ IoT. Inwe NFC n'ime Raspberry Pi board nwere ike ịmasị ịmịkọta ngwaọrụ ma gbasaa ọrụ Raspberry Pi, dị ka ijikọ na ndị na-ekwu okwu, smartv, wdg ... Ihe ndị nwere ike jikọọ na Raspberry Pi, mana NFC na-eme ka ọ dịkwuo mfe ijikọ ma hazie ngwaọrụ ndị a.
Ihe kpakpando nke Raspberry Pi abụrụla ọdụ ụgbọ mmiri GPIO, n'etiti ihe ndị ọzọ n'ihi ọtụtụ narị ọrụ na ngwa ọhụụ nke ọdụ ụgbọ mmiri a na-agbakwunye na Raspberry Pi. Utu Pi 4 nwere ike nwalee ihe a ma mụbaa ọdụ ụgbọ mmiri GPIO na ntanye ndị ọzọ ya mere iji nwee ike ịnyekwu ọrụ, ọrụ na-akwado ma ọ bụrụ na chipset eji bụ n'ezie ike karịa.
Dịka anyị kwurula banyere ọdụ ụgbọ ethernet, enwere ike gbanwee ọdụ ụgbọ USB ma dochie ọdụ ụgbọ mmiri microusb ma ọ bụ ozugbo site na ọdụ ụgbọ USB-C, ọdụ ụgbọ mmiri nwere nnyefe dị elu yana obere pere mpe karịa ọdụ ụgbọ USB. Ngbanwe a abụghị naanị na-enye ohere Raspberry Pi ka ọ “belata” ma na-enyekwa ikike karịa na bọọdụ ahụ, na-akwado ọsọ ọsọ dị elu karịa ọdụ ụgbọ USB ọdịnala.
Akụkụ siri ike bụ akụkụ nke o doro anya na Rasberi Pi kwesịrị ịgbanwe maka ụdị bọọdụ na-esote. Akụkụ abụọ pụtara ìhè na nke a: bọtịnụ ike na njikwa ike nke na-enye ohere iji batrị ma ọ bụ ntinye nwere ike karịa karịa ọdụ ụgbọ mmiri microusb. Akụkụ abụọ nke Ras Piberry Pi 4 kwesịrị inwe.
Nke ahụ bụ, gụnyere bọtịnụ gbanye na gbanyụọ, ihe ọtụtụ na ọtụtụ ndị ọrụ na-achọ ma jụọ maka mbadamba Pipe Pi. Ojiji nke a kpọmkwem njikọ maka ike ga-abụ ihe dị mkpa na-agụnye. Ọ bụ ezie na enweghi nsogbu nke mgbagwoju anya, ọ bụ eziokwu na ọdụ ụgbọ mmiri microusb na-enye obere ike na nke a pụtara na oge ụfọdụ anyị enweghị ike iji ike niile nke Raspberry Pi n'ihi enweghị ike.
Sọftụwia bụ akụkụ dị oke mkpa, ikekwe nke kachasị mkpa, n'ihi na na-enweghị sọftụwia, ọ baghị uru ịnweta ụdị Raspberry Pi kachasị ike. Ọ bụ eziokwu na Rasberi Pi anaghị enwe ngwanrọ, ee, o kwesiri inwe ebe dị mma karịa maka ndị ọrụ novice. Ya mere, nzọụkwụ ọzọ maka Foundation kwesịrị ịbụ nsonye nke ndị na-enyere aka iji nyere ndị ọhụrụ aka ịhazi akụkụ nke bọọdụ ma ọ bụ ọrụ ya. Beingbụ Raspberry Pi 4 otu ezigbo osisi maka ma ndị ọkachamara ọkachamara na ndị ọrụ novice.
Anyị ekwuola ọtụtụ okwu banyere ihe ndị Rasberi Pi 4 kwesịrị inwe yana ike na adịghị ike nke bọọdụ ahụ, mana ugbu a, m ga-enye nhazi m ezigbo maka Raspberry Pi 4.
Efere ọhụrụ ahụ o kwesiri inwe GPU di iche, bọtịnụ ike, wepu ọdụ ụgbọ ethernet ma dochie ọdụ ụgbọ mmiri na ọdụ ụgbọ mmiri microusb. Ihe nchekwa 2 GB nke ebule ga-adị mma ọ bụ ezie na nke a nwere ike ime ka ihe nlereanya ahụ dị oke ọnụ ma bụrụ nke na-adịghị arụ ọrụ. Ma ọ dịkarịa ala nhazi a bụ ihe m weere dị mkpa ma dị mkpa maka ụdị ọzọ. Ma gị Kedu ihe ị chere Rasberi Pi 4 kwesịrị inwe?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Ntu Pi » Kedu ihe ị tụrụ anya n'aka Rasberi Pi 4?
Maka m ọ bụ ihe arụ iji wepụ ethernet na eriri iji naanị ohere dị ka ihe ngọpụ ...
Ọ dịghị onye ma ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ dịghị onye chọrọ ka ọ dị obere, mana onye ọ bụla chọrọ gigabit ka NAS ha dị mma, ihe nkesa ha nwere ntụkwasị obi ma kwụsie ike, yana eriri nwere obere ping na wifi na-adịghị agbanwe agbanwe. Uschọrọ ka eriri USB 3.0 nyefee amps na mpaghara ala
Usb a iji jikọọ ihe niile ma ọ bụghị ụbọchị niile na otgs
Nke ahụ bụ, Obi dị m ụtọ na enwere ebughibu maka ojiji ndị ọzọ na-abaghị uru, mana emetụla ihe nlereanya ahụ aka b, nke bụ ihe magburu onwe ya na fissile niile.
Ndewo Jdjd ị dị mma na Ethernet, anaghị m agbagha nke ahụ, mana enwere ọrụ ebe ịchọrọ ka Raspberry Pi dị mma, yabụ ihe ịga nke ọma nke Pi Zero na Compute Module. N'ezie, maka ihe ị na-ekwu, ethernet ka mma na wifi ma ọ bụ ọdụ ụgbọ mmiri USB abụghị ndị a pụrụ ịtụkwasị obi, mana enwere ọtụtụ ọrụ chọrọ ike dịka Raspberry Pi ma naanị site na wifi ma ọ bụ site na Bluetooth. Ma okwu gị na-atọ ụtọ n'ihi na ọ na-emepe arụmụka ọzọ. Kwesịrị inwe ezigbo mpempe akwụkwọ na-esote usoro A na B +? Kedu ihe ị chere?
Echere m na ego RAM bụ ihe ngwa ngwa, karịa karịa nha, ọkachasị iji dochie kọmpụta gị na bọọdụ raspberị. Kwalite USB na ethernet ga-abụ isi nke abụọ, na-esote site na iwalite ike na bọtịnụ ma ọ bụ / ngbanyụ yana ikike ijikwa na-akwado batrị.
Ndewo Gwallace, ekwenyere m na gị, n'oge a, ọnụ ọgụgụ ebe nchekwa bụ ihe dị mkpa, ọkachasị iji gbaa ngwa ma ọ bụ ngwa dị arọ, dị ka xamp ma ọ bụ IDE. Ọ ga-eju anya ma ọ bụrụ na utu anaghị etinye nke a na nsụgharị na-esote, ị naghị eche?
Ihe kachasị mkpa m hụrụ bụ RAM, mana enwere otu ihe dị ezigbo mkpa na nke ahụ bụ ọnụ ahịa bọọdụ ahụ, ekwesịrị inwe mmụba mana na-enweghị ịbawanye ọnụahịa ka o wee nwee ike ịnweta ọtụtụ mmadụ dị ka o kwere mee.
Echere m na ị nwere ike tinye ihe na enweghị ya, ebe enwere ntinye 4 A / D. Enweghị mkpa ịtinye ha na bọọdụ ọzọ, yana onye ntụgharị A / D. Enwere akụrụngwa na-adịghị agwụ agwụ maka ha.
na mgbe ahụ ma ọ bụrụ na: Tinye ihe On / Gbanyụọ na-adịghị imebi RAM ma ọ bụ SD.
Zaghachi M. Daniel Cavallotti
Manuel Arce kwuru dijo
Echere m na na rpi4 ọhụrụ ọdụ ụgbọ mmiri niile kwesịrị ịbụ micro (microusb, microhdmi, microSD, wdg ...), wepu ethernet, wepu ọdụ isi okwu, kewapụ cpu na gpu ma tinye 2 g nke ebule.
Ọ bụghị iji belata nha ya, nke ahụ dị ntakịrị, mana ihe a niile ga-ebelata ọkụ ma melite arụmọrụ ahụ nke ukwuu. N'ezie, ọ ga-abụ ihe a na-apụghị izere ezere ịgbakwunye banyere ọdụ ụgbọ mmiri microusb 6 maka ndị chọrọ itinye ntanetị ịntanetị, Bluetooth. Ma ndi gpio, amaghim. Ọ nwere ike ịba uru iji jikọta ya dịka ọkọlọtọ na ụda si eriri microhdmi. Maka m ọ ga-adị mma.
Zaghachi Manuel Arce
Ọ kwesịrị ịmụba Ram ebe nchekwa na Processor.
Ekwenyere m na ọ bụrụ na ọ dị mkpa, enwere ike ịnwe ihe nlere anya karịa Ram na ọnụahịa ahụ karịa, ọtụtụ n'ime anyị ga-akwụ ụgwọ maka nke ahụ.
Zaghachi carlos perez
Jiri akpụkpọ anụ-ebipụta akwụkwọ rụọ ọrụ maka Zoa, ihe ọhụụ nke Meadow nke Oge A mepụtara
Ndị uwe ojii Dubai na-egosi hoverbike ọhụrụ ha nke ha ga-ejegharị n'okporo ụzọ